မင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများအတွက်:အခမဲ့ XXX ဂိမ္း
အရှည်ဆုံးအချိန်များကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ယံ၊အခမဲ့ဂိမ်းများခဲ့တစ်နည်းနည်းရုန်းကန်။ သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တွေကိုလက်လှမ်းပျော်မွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းနှင့်တကယ်မင်းအကောင်းဆုံးအမှောင်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအတွက်သ! ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳမင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများ:ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စီမံကိန်းနှင့်ဒေတာဘေ့စ၏ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းညစ်ညမ်းဂိမ္းကိုကောင်းမြတ်ခြင်း။ ကျွန်မတို့ဟာအရမ်းခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တစ်ခုအရေအတွက်၏လကြောင်းသေချာစေရန်မည်သူမဆိုလာကဒီမှာပျော်မွေ့နိုင်အချို့ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာကြောင်းသူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုမတှေ့လိမျ့မညျ။, မှန်တယ်:ဤစီမံကိန်းဖြစ်ပါသည် ၁၀၀%သီးသန့်၊အဓိပ္ပါယ်ကကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းနှင့်ကျနော်တို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူတို့ကိုလည်း:အမွတ္ပတ်ပတ်လည်နှင့်ပတ်သက်သည်နှင့်အမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်! ဒါကြောင့်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားစရာစွန့်စားမှုနှင့်ယခု၊ကျနော်တို့နောက်ဆုံးအဆင်သင့်ပြပွဲလူတိုင်းထွက်ရှိပါတယ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးမှစီမံခန့်ခွဲအောင်မြင်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်တစ်ခေါင်းစဉ်။ ထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ပြီတစ်ဦးလွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုကိုအခါ၊ဒါပေမယ့်သင်ရှာဖွေနေပါတယ်အရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနား၊သင်ကတယ်ရိုင်းသောသွားကြဖို့၊လက်ျာ? သတိပြုပါယူကျေးဇူးပြုမင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများလည်းဖြစ်ပါတယ် ၁၀၀%အခမဲ့သင်ဆက်သွယ်နိုင်:မပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်ဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အလာ။, ငါတို့သည်လုပ်ကိုင်ရန်အပေါ်တစ်ဦး freemium မော်ဒယ်ရှိရာအားလုံး၏ခေါင်းစဉ်သင်တို့အဘို့ကစားရန်:သင်သာအချိန်များအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ဘာမှမသင်ချင်တယ်ဆိုရင်သော့ဖွင့်အချို့သောအေးမြသည်၊စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဖျားဝင်။ သင်ကူညီပံ့ပိုးပါလိမ့်မယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊သင်မူကားရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်သင်ချင်ကြပါဘူး–အဆိုပါရွေးချယ်မှုရင်းသင့်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ XXX ဂိမ်းဒေတာဘေ့စ
ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ပညာရှိဖြုန်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ဒီမှာအကြောင်းပြောနေတာကျွန်ုပ်တို့ညမ်းဂိမ်းဒေတာဘေ့စ–ကလူူေပြောဖို့အလွန်အနည်းဆုံး။ ဖြစ်ရာလက်ရှိအရပ်၊၃၂ ဂိမ်းများထဲမှာ၊ကျွန်မတို့ဟာအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကတည်းကပလက်ဖောင်းပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းရောက်လာပြန်၏ဇူလိုင်လအတွက် ၂၀၁၅။ ကျနော်တို့လည်းလွှတ်ပတ်ပတ်လည် ၅ မှာအသစ်တွေဂိမ်းအပေါ်အလိုက်၊စိုက်ကျယ်ကျယ်အပေါ်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးဂိမ်းအတွက်ရွေးချယ်စရာအမှန်တကယ်ခြေအိတ်မှ။ သင်စိတ်ကူးနိုင်သကဲ့သို့၊ဤ ၃၂ ဂိမ်းများညီစတိုင်အတွက်၊ချဉ်းကပ်၊အနက်၊အခက်အခဲနှင့်တော့။, လိုသင်ခံစားဖို့သင်ကြိုက်အများကြီးရှိသည်ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတွင်းပိုင်း၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကြပြီမဟုတ်ပဲကူးယူနှင့်တူညီသောဂိမ်းနောက်တဖန်မကျော်နှင့်အတူအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်နှင့်ဂရပ်ဖစ်။ အဘယ်သူမျှမအမှားလုပ်ပါက:ဤအမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့ထုတ်လုပ်သောချည်နှောင်လျက်ရှိပိုသင့်ရဲ့စိတ်ကိုရူးသွပ်။ ငါသည်ယုံကြည်စိတ်ချရယ်နေတဲ့ချစ်ရန်သွားကြသည်အဘယ်အရာကိုသင်ရှာဖွေအထူးသဖြင့်ခံစားရကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်သည်အဓိကအရောင်းရဆုံးအမှတ်ရပါ။ ဒါကြောင့်အင်း–သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းမနေပါနှင့်အတူကိစ္စတွေလုပ်နိုင်ဖို့အဆိုပါဥပဒေကြမ်းနှင့်ကိုက်ညီ:သာလာဖို့အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးနှင့်သင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်စိတ်ကူးရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်။, မင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများသည်အမှန်တကယ်ဂိမ်းခရီးသည်သွေးကြော dudes!
ကြည့်ရှု၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအကောင်းဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်အဘယျသို့လူတိုင်းကိုပြောပြပြီးအဓိကအရောင်းအချက်တစ်ချက်မှာမင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများ၏အရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့င့်နှင့်အနုပညာ။ ကျွန်တော်တို့ငှားရမ်းအကောင်းဆုံးအမည်များအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတို့ကိုပေးဆောင်ရပြီအများအတွက်ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှု–အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်အစု၏ပရိသတ်များတည်ဆောက်နေ့သည်! ဒါဟာဖြစ်မသွားမယ့်အတော်လေးအချို့အချိန်အထိမည်သည့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်ဒီနေရာကိုရရှိဖို့အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်။ အနက်:ဤသည်အချို့ကြယ်တဲ့အရာတွေသင်ရှာတွေ့ဖို့မသွားမယ့်ဘယ်နေရာမှာမဆို။, မသာအတွက်-ဂိမ်းကစားဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်ကကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိစွာအသုံးချမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်နှင့်အတူအနုပညာရှင်များ၏အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖန်တီးရန်ထုံးစံများသည်၏အကြိုက်ရာမဲ။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့သူတို့တကယ်သိမှရရန်မည်သို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့နှင့်အတူလွင့်နဲ့မရပ်တန့်သည်အထိလူတိုင်းမြင်ဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်မှု။ ဒါကြောင့်၊ဟုတ်ကဲ့၊ကျွန်မအထင်ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူးင့်များအတွက်သူမည်သူမဆိုဖွင့်ဖို့ရှာဖွေနေခံစားကြည့်ပါအချို့သောညစ်ညမ်းဂိမ်းများရရန်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ချက်ချင်း–ဤအရာတစ်ခုခုသည်သင်သွားမယ့်နောင်တရ!
အများဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏အဂိမ်းများကစားရန်ရိုးရှင်းသောသည်နှင့်သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအဖြစ်တစ်ဦးပါရမီပုံမှသူတို့ကိုထွက်–ပဲပတ်ပတ်လည်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်သင်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကပြောသည်ဘဲလျက်၊ကျနော်တို့လုပ်ဖို့ရှိသည်အထူးလှေစနစ်ခွင့်ပြုထားရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုတက်အခြားအဂိမ်းကစားဆန့်ကျင်အတွက်ရှာပုံတော်အတွက်အမြင့်ဆုံးရာထူး။ သူတို့စီမံခန့်ခွဲဖို့တစ်သမတ်တည်းလုပ်ဆောင်ကောင်းစွာအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်အတူအမျိုးမျိုးသောတံဆိပ်၊ကွန်ယက်အင်္ဂါရပ်အတွက်၊ဂိမ်းပြန်နှင့်ပင်စစ်မှန်သော-ဘဝခိုးပဲထွက်ပေးပို့ဖို့သူတို့ကို! ကျော်ကိုလာမယ့် ၁၂ လအတွင်း၊ကျနော်တို့ကယ့်ကိုလိုတိုးချဲ့ဖို့ဒီအယှဉ်ပြိုင်မှု၏မင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများနှင့်ထည့်သွင်းအချို့ကိုမှန်ကန်အရသာထဲသို့ရောနှော။, ကျွန်တော်လည်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်အောင်မြင်မှုများစနစ်အပ်ထားရန်သင်ဆန့်ကျင်တက်အခြားသူများအတွက်အ completionism။ အဘယ်သူမျှမမှပင်နီးကပ်ရှိခြင်း၏အောင်မြင်မှုများကနေအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်း–သင်ပထမဦးဆုံးဖြစ်နိုင်? အဲတစ်ဦးအပိုဆောင်းအထူးဆုများအတွက်ပထမဦးဆုံး ၁၀ သူလူစီမံခန့်ခွဲထိုသို့ပြုမှ–အနှေးနဲ့အမြန်စတင်၊သင်ပြီးစီးနိုင်! တဖန်:အပြိုင်အဆိုင်ထောင့်မင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများကိုယ့်တစ်ဦးရွေးချယ်မှု၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထင်ကောင်းတစ်လမ်းမှမိတ်ဆက်ပေး replayability ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်အတွက်အမျိုးအစားရှိကြောင်း၊ဝေ့နှင့်အတူရုန်းကန်ထိန်း။
မင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများတည်ဆောက်ခဲ့လာက္ေဖုန်းအစိတ်အတွက်၊ဒါပေမယ့်မသွားဘူးကြောင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်အပေါ်တစ်ဦးမိုဘိုင်း၊သင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေခံစားမင်းသမီးလိင်ဂိမ်းများ–ရိုးရှင်းစွာအမှုမဟုတ်ပါ! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းမှရရှိနိုင်အားလုံးထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ဤမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အနိုင်အပြေးအတော်လေးမကြာသေးမီဗားရှင်းဟာအဓိက။ ကျနော်တို့လက်ရှိတွင်အပံ့ Chrome၊ရှုနှင့်မြေခွေးတရား၊သို့သော်အများစုမှာအဖြစ်ကောင်းကိုအလုပ်မပါဘဲတစ်ဦးပြဿနာ။, ရှေ့ဆက်မသွားကျွန်တော်လည်းလွှတ်ပေးရန်တစ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္ထားများအတွက်အော့ဖ်လိုင်းဂိမ်း–အရာတစ်ခုခုအကြောင်းကိုလူအများကြီးဖို့မျှော်လင့်နိုင်အောင်သူတို့ဂိမ်းအဘယ်သူမျှမနေပါစေဘယ်မှာသူတို့နှင့်သက်ဆိုင်ဘယ်လိုပါ့င်းတို့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု။ ဒါကြောင့်ရေတိုအတွက်တွေများလာရန်ကျွန်ုပ်တို့ညမ်းဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်–ကကောင်းတစ်ဦးအချိန်မှဤနေရာသို့သွားရန်ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်နှင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ရပ်ရွာကိုယ်!
သင်အဆင်သင့်တက်လက်မှတ်ထိုးပြီးကစားအကောင်းဆုံး XXX ပတ်ပတ်လည်ဂိမ်း? ထိုအခါရက–သင်သည်အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်!